Ny endritsoratra tsara tarehy indrindra ho an'ny endriny | Famoronana an-tserasera
Amin'ny maha-mpamorona endrika tsara anao dia fantatrao fa manan-danja amin'ny endritsoratra isan-karazany no zava-dehibe, satria tsy fantatrao mihitsy hoe inona no tetikasa ho avy aminao na karazana font inona no ho tsara indrindra amin'ny tranga tsirairay. Noho izany, androany dia nifantoka tamin'ny taratasy kanto izahay, ireo izay rehefa jerena dia manome anao fahatsapana fa tena karakaraina tsara, saika vita tanana indrindra ho an'io teny na fehezanteny io ary tsy mila antsipirihany hafa izy ireo raha te hahalala.
Raha mitady an'io karazana io ianao litera kanto Ho an'io tetikasa io izay tsy hainao ny manome ny farany, dia mamporisika anao izahay hijery ireo voafantina mba hahitana raha misy amin'izy ireo no ilainao hamitana endrika amin'ny endriny farany.
1 Taratasy manja: inona no azo ampiasaina
2 Endri-tsoratra tsara tarehy - Ireto no safidinay
2.2 Indray andro
2.5 Valencia, iray amin'ireo litera kanto kanto indrindra ao
2.9 Taratasy miafina sy kanto miaraka amina mistery
Taratasy manja: inona no azo ampiasaina
Ny litera tsara tarehy dia miavaka amin'ny fananana endrika azy. Misy safidy maro; avy amin'ireo izay mitady ho mazava tsara ary miaraka amin'izay dia misongadina amin'ny kapoka, ho an'ny hafa fa tena miroborobo tokoa.
Ny fampiasana litera raitra dia maro. Toy izany koa no azo ampiasaina amin'ny fonon'ny magazine, izany ho an'ny sary famantarana. Tsy tena manokana amin'ny karazana tetikasa iray izy ireo, fa azonao ampiasaina izany isaky ny tianao. Ankehitriny, ireo toetra mampiavaka ireo litera ireo dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny zavatra tianao ho tratrarina iray manontolo. Ohatra, raha efa manana sary, sary na sary malaza be ianao, ny fametrahana karazana endri-tsoratra voaravaka endrika maso dia hiteraka fanilihana, noho izany dia mila misafidy endri-tsoratra hafa iray tsotra kokoa ianao, saingy tsy dia kely loatra.
Endri-tsoratra tsara tarehy - Ireto no safidinay
Tsy misy isalasalana fa ao Pejy misy endri-tsoratra dia hahita endritsoratra an-tapitrisany ianao. Misy zavatra ho an'ny tsirony rehetra, ary na dia averina aza ny sasany, dia tsy mampihena be loatra ny isan'ny safidinao izany. Noho io antony io dia mety ho sarotra indraindray ny mahita ny tsara indrindra, ankoatry ny mitaky fotoana; noho izany dia mitodika any amin'ny lisitry ny tononkira tsara indrindra ianao.
Ary, amin'ity tranga ity, manolotra anao iray miaraka amin'ireo litera kanto tsara indrindra azonao atao izahay.
Tianay ireo taratasy kanto ireo raha vantany vao hitanay izy ireo satria tsy ny iray ihany no anananao endritsoratra tsara sy kanto, fa mazava be ny resaka famakiana azy, ary koa ny fanaingoana azy.
Ny zavatra iray mety tsy fantatrao dia ny italiana, fa tsy toy ny litera hafa izay manilika azy ireo amin'io heviny io, tsy izany no mitranga eto, ka mety tsara ho an'ny fonony na ho an'ny lohateny.
Ny One Day dia typeface kanto izay mampiasa litera lehibe. Mampahatsiahy anao ny famolavolana azy a fijery geometrika maoderina. Ankehitriny, araka ny efa nolazainay taminao, amin'ny sora-baventy ihany no misy azy. Ny mpamorona azy, Nawras Muneer, dia tsy namorona sora-baventy, noho izany dia mamporisika anao izahay hampihatra izany amin'ny lohateny, indrindra amin'ny fomba futuristic na tianao hanome azy io maoderina.
Tsy isalasalana fa rehefa mamaky an'io anarana io ianao dia hisarika ny sainao satria toa ody ody io. Fa ny marina dia tena misy ireo litera kanto ireo, ary ny vokatra vokariny dia manaitra. Rehefa mahita azy ireo ianao dia toa tsy manana zavatra manokana, ankoatr'izay dia samy manana ny toerany avy ny litera tsirairay, fa voafaritra tsara amin'ny tsipika madio sy tsara, sns. Fa rehefa mijery azy ianao dia misy fotoana tsy mahita zavatra hafa ankoatran'io taratasy io ianao. Toy ny hypnotizing anao izany.
Ka mety lavorary ho an'ny hafatra amin'ny sary, logo sns.
Te hanana font litera kanto sy tantaram-pitiavana ve ianao? Azonao atao ny mandinika an'io. Toy ny ozona mahatsiravina, tsy maintsy atao izany miondrika sy miolakolaka kely kokoa noho ny mahazatra, fa tonga lafatra amin'ny famoronana fahatsapana tantaram-pitiavana.
Raha ny marina dia tonga lafatra izy io raha toa ka misy ifandraisany amin'ny fanasana amin'ny mariazy, batemy, fiombonambe na hetsika hafa mifandraika amin'ny fitiavana ny vokatrao.
Valencia, iray amin'ireo litera kanto kanto indrindra ao
Valencia dia loharano iray mampiasa miroborobo, fa tsy be loatra ny taratasy. Ny sora-baventy ihany no miroborobo toy izany, toy ny tsipìka mikopakopaka amin'ny rivotra no anaovana azy.
Ilay endritsoratra mihitsy dia misy kapoka matevina kokoa, ary saika toa ny tan-tànana tamin'ny penina na ny toa azy, izay manome azy ny hafanana sy ny maha-akaiky azy rehefa mampiasa azy.
Raha mahita an'ity endri-tsoratra ity ianao, ny zavatra mahazatra dia ny eritreritrao zavatra zazakely na tanora; zavatra mampihomehy ao aminy. Ary izany dia mahatonga azy ho iray amin'ireo litera mahafinaritra azonao amin'ny solosainao.
Vita amin'ny kapoka mahia sy amin'ny fampiasana fomba fanoratra an-tànana, dia mety indrindra amin'ny tetik'asa izay ny ankizy no lakile na mitady fahatsapana fahafinaretana sy firaisana tsikombakomba amin'izay mijery azy ianao.
Loharano: The Lombok Corner
Matilde dia karazana typeface izay afaka mampatsiahy anao amin'ny fomba sasany nivoaka tamin'ny milina fanoratana izy io. Manana tsipika tena tsara izy io nefa koa namboarina ho toy ny hoe lava be izy ireo, izay misarika ny saina. Ary koa, raha mijery akaiky ianao, dia misy litera maromaro mifarana amin'ny antsipiriany kely, curl tokana sy manirery izay mahatonga anao hahatsikaritra azy bebe kokoa.
Izy io dia mety tsara amin'ny tetik'asan'ny ankizy, na koa amin'ny fivarotana an-tserasera mifandraika amin'ny zaitra, kofehy, vokatra vita tanana, sns. Raha mifantoka amin'ny ankizy koa izy ireo, vao mainka izany.
Raha nilaza taminao izahay fa ny curl Matilde dia manana curl kely, ankehitriny izay hitantsika dia miafara amin'ny litera toy ny baolina izy ireo, izay manome endrika kanto sy miaraka manaitra (toy ny hoe rehefa nanoratra ianao dia nametraka tondroy ny taratasy mba hanazavana ny toerana misy anao).
Ao aminy ihany ireo litera misy tsipika telo: tsara, salasalany ary matevina, izay zaraina manerana azy rehetra.
Taratasy miafina sy kanto miaraka amina mistery
Andao horesahintsika izao ireo taratasy kanto ireo, mety indrindra amin'ny tetik'asa ankizy na nofinofy, satria io no mahataitra anao.
Nozaraina tamin'ny fomba mahatsikaiky tokoa ireo litera ireo, satria samy hafa ny habeny, ny curvature sy ny curls dia mahatonga ny teny hoe "mount", fa tsy mahasarotra azy ireo ny mamaky azy, ny mifanohitra amin'izay no izy.
Amin'ny tenany dia manja sy kanto izy ireo.
Ny olana tokana dia izany tsy misy afa-tsy amin'ny sora-baventy, fa raha tsy lahatsoratra lehibe dia lehibe izy dia mety ho ilay mety.
Betsaka ny litera kanto kokoa, ary afaka mandany ora maro izahay manome anao ohatra sy hevitra hampiasa azy ireo, saingy ireo no noheverinay fa tsara indrindra tamin'ny fikarohana voalohany. Afaka manoro hevitra anay bebe kokoa ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny endritsoratra tsara tarehy indrindra ho an'ny endriny